Unephupho lokuwina indondo owe-kwaito | News24
Unephupho lokuwina indondo owe-kwaito
Syabonga ‘Seaman’ Zaca. ISITHOMBE: sithunyelwe
UMCULI we-kwaito waseZondi Store, e-Elandskop uthi iphupho lakhe ukuthi agcine esewina indondo ye-Best Kwaito.
USyabonga “Seaman” Zaca (35) usanda kuphinda i-album yakhe yesithathu esihloko sithi Inja yegame.
Le-album inezingoma ezili-14 kanti uthi uqonde ngayo ukuqwashisa intsha.
“Nqaqala ukubhala izingoma ngonyaka ka-1996 ngifunda ibanga lika-Grade 8 kodwa ngize ngakhipha i-album yami yokuqala ngonyaka wezi-2010. Kule-album engisanda kuyikhipha manje izingoma eziningi zixwayisa intsha ngezinto ezingalungile njengokudla izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo.
“Ngibone kungcono ukuthi ngisebenzise umculo ukuzama ukudlulisa umyalezo kanye nekwexwayisa nokuyala ngoba intsha iyawuthanda umculo. Sekukaningi kuzanywa kukhulunywa nentsha kodwa iningi layo belingazihambeli lezo zinkulumo. Umculo wona ngiwubone uyisu elingcono ngoba bayawulalela futhi bayawuthanda,” kubeka yena.
Uthe kusukela angena kule ndima yezomculo uzibona esekhulile kakhulu njengoba esesa ne-studio sakhe lapho eqophela khona izingoma zakhe.
“Le-album yami ngiziqophele yona kanti futhi ngiyaziqhenya ngaloko. Ngifuna ukuqhubeka ngisebenze kanzima ngizikhandle ukuze ngizokwazi ukuthi ngigcine ngiwine indondo nenginesiqiniseko sokuthi ngizoyithola. Ngisebenze kanzima kuleminyaka eyedlule kanti ngisazoqhubeka futhi nokusebenza kanzima. Into ebalulekile nje uma ukulendima ukwenza isiqiniseko sokuthi ngesikhathi uqopha umculo wakho ushaya into ecokome ezothandwa abalandeli.
Uma wenze njalo uzophumelela kanti futhi angeke nje uvele uphuphe emculweni.”
Ngaphandle kokufuna ukuwina indondo uZaca uthe kuyiphupho lakhe ukuthi asize abanye abaculi abasafufusa njengoba esevule nestudio sakhe. Uthe akafuni ukuthi lesi-studio sigcine sisiza yena kuphela kodwa ufuna kusizakale nabanye abaculi abancane abasafufusa nabasazovela.